Maxaa ku kallifaya Kenya inay maxkamdda ka meermeerto - Awdinle Online
Maxaa ku kallifaya Kenya inay maxkamdda ka meermeerto
Qalinkii: Abdiaziz Hussein Hassan
Maxkamadda caalamiga ah ee ICJ.waxa ay isticmaashaa marka laga hadlayo xeerinta ay kala xeerinayso dacwadaha Badaha ee dalalka kala duwan laba nooc oo Xeerar ah.
1- Xeerka badda ee qaramada midoobay ee soo baxay 1982 dii oo la la akhrinayo xeerarka ay ka leeyihiin dowladaha is dacweynaya arrinta ay isku hayaan, iyada oo la waafajinayo xeerka caalamiga ah ee (International Law)ga.
2- Xeerka hab-raaca Maxkamadda ee loo yaqaano Statue ga ICJ.
Qeybta hore ayaa wax badan lagu kala saaraa marka ay dacwadi timaaddo, qeybta danbe waxay aad diiradda u saartaa Nidaamka guud ee maxkamadda.
Hadaba marka ay noqoto in Maxkamaddu ay bilowdo garniqista labada Dowladood:
Soomaaliya waxay cuskanaysaa dhowr qodob oo kala ah:
B- qodobada 15aad, 74aad iyo 83aad ee xeerka la isku wada waafaqsan yahay ee kala nidaamiya badaha Adduunka ee loo yaqaano (UNCLOS).
T- Xeerarka Dalka Law no:37 1972, 88, 89, 14 oo dhamaantood caddeynaya badaha waxa aan ka qabno iyo waafiqideena UNCLOS ka.
J- Xeerkii Kenya ay soo saartay 1972 Kenya Territorial Water Act farqadiisa 4aad oo acddeynaya waxa ay maanta Soomaaliya ku doodayso, waana xeer ka diiwaan gashan qaramada midoobay oo aysan Kenya inkiri karin.
Kenya ma haysato qodobo waafaqsan UNCLOS ka oo sheegaya bad furan, daris ah sidaan loo qeybinaayo.
1- Waxa ay ku doodaysaa xeerkeeda 1989 kii qeybtiisa III aad No-4aad farqadiisa 3aad, oo waliba sheegaya inay Somaliya iska waafaqi doonaan waa halka ay qiilka ka raadinayaa ee.
2- Official Gazzet kii Madaxweynahoodii 2005 ta waa waqtiga ay ku dhiiradeene.
Haddaba marka la eego labada dhinac Xeerarkooda kan UNCLOS ka iyo Is waafaqid la’aanta xeerarka Kenya: waxaa soo baxaysa in Soomaliya ey leedahay Dhul badeedka la isku haysto muran la’aan.
Kenya halka khiyaar ee ay heysato waa inay heshiis macmal ah ka sameysato Siyaasiyiin Somali ah oo xil haysa si ay u wafajiso xeerkeedii 1989 lkn aysan toos u tagin maxkamad.
Sidaas darteed waa ay sameyn doontaa wax kasta oo ay kiiskaan uga fogeyn karto ICJ
Somaliya maxaa la habboon.
Waxaan kula talin lahaa Dowladda Soomaaliya:
1: inaysan marnaba ka jilcin halka ah maanta taagan tahay Dowladda oo ah aan Caddaaladda ku kala baxno.
2: Maxkamadda in la cadaadiyo lana yiraahdo MEERMEERKA Kenya suura gal maaha, Laba hor istaag iyo Dib dhigis bay maraysaa ku filan intaas.
Previous articleDowladda oo dib Kismaayo ugu celisay dad ay Jubaland ka soo musaafurisay
Next articleShacabka Kismaayo maxay ku muteysteen ciqaabta ay marineyo DF Soomaaliya?